MDSNG: January 2011
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အကူအညီဖြင့် မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံမှ ၂...
ဂြိုဟ်တုစီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ လိုက်နာစဉ်း...
တတိယမြောက် လမ်းကြောင်းပြ ဂြိုဟ်တု တရုတ် လွှတ်တင်
တရုတ်​နိုင်ငံ၏ ပထမ​ဆုံး​ အသံ​တိတ်​ဂျက်​တိုက်​လေယာဉ...
သက်ရှိများ နေထိုင်နိုင်ဖွယ် ရှိသော ဂြိုဟ်ပေါင်း ၁၂...
Energia - ရုရှားအာကာသ အေဂျင်စီ
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အကူအညီဖြင့် မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဂြိုဟ်တုတစ်ခု လွှတ်တင်မည်
| Labels: မွန်ဂိုလီးယားသတင်း
မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အကူအညီဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဂြိုဟ်တုတစ်ခု လွှတ်တင်နိုင်ရန် မျှော်လင့်သည်ဟု ဒေသခံမီဒီယာများမှ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှ အာကာသ လေ့လာရေးအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့သည် မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံသို့ ရာက်ရှိ၍ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနတွင် နှစ်ရက်ကြာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို စီစဉ်ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ နှစ်နိုင်ငံလုံးမှ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖြစ်သော မစ်ဆူဘီရှီ၊ တိုရှီဘာ၊ ဟီတာချီနှင့် ဆူမီတိုမီ တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များလည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ယခုလက်ရှိတွင် မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံသည် ကျေးလက် နယ်ပယ်များသို့ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ရေဒီယို အစီအစဉ်များ ထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် Ipstar-5 broadband ဂြိုဟ်တုကို အသုံးပြုနေပြီး ဆက်သွယ်ရေးနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်း ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် Intelsat ဂြိုဟ်တုကို အသုံးပြုနေသည်။ ထို့ပြင် ရာသီဥတုနှင့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးအတွက် အသုံးပြုရန် data အချက်အလက်များကို ပတ်လမ်းအနိမ့်အတွင်းရှိ ဂြိုဟ်တုများမှ ရယူသုံးစွဲသည်။
မွန်ဂိုလီးယား အစိုးရသည် နိုင်ငံ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အကူအညီပေးနိုင်သည့် ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တုတစ်ခုကို အာကာသထဲသို့ ပစ်လွှတ်နိုင်ရန်အတွက် ဂြိုဟ်တု စီမံကိန်းတစ်ခုကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟု မွန်ဂိုလီးယား သတင်းအချက်အလက်၊ ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာနှင့် စာတိုက် အာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အမ်ဂါလန်ဘတ် က ပြောကြား သွားခဲ့သည်။
ဂြိုဟ်တုစီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ လိုက်နာစဉ်းစားရမည့်အဆင့်များ
အဆင့် ( ၁ ) ။ ဂြိုဟ်တုကို အသုံးပြု၍ မိမိတို့လိုအပ်သော ( အသုံးပြုလိုသော ) ဂြိုဟ်တုမှ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မည့် အချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း
ဥပမာအားဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုစာတမ်းရေးသားရာ၌ သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပေးပို့လက်ခံနိုင်ရန် ၊ ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှု ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် ၊ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု ပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ၊ ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး ဖုန်းကွန်ယက်များ တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန် စသည်ဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုကို အသုံးပြု၍ မိမိတို့လိုချင်သော အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာရေးသားရပါမည်။
အဆင့် ( ၂ ) ။ လိုအပ်ချက်များကို ဂြိုဟ်တုတွင်ပါဝင်မည့် စနစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း
မိမိတို့သတ်မှတ်ထားသော လိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အ၀ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုမည့် နည်းပညာများနှင့် ကုန်ကျနိုင်မည့် ငွေကြေးပမာဏ ၊ စီမံကိန်းကြာချိန် စသည်တို့ကိုစဉ်းစားရပါမည်။
အဆင့်( ၃ ) ။ ဂြိုဟ်တုစနစ်တစ်ခုလုံး၏ လုပ်ဆောင်ချက်စနစ်များကို အတည်ပြုခြင်း
ဂြိုဟ်တုစနစ်တစ်ခုလုံး၏ လုပ်ဆောင်ချက်စနစ်များဆိုသည်မှာ ဂြိုဟ်တုသည် အာကာသထဲရှိ မိမိပတ်လမ်းကြောင်းသို့ ရောက်ရှိသောအခါ လုပ်ဆောင်သည့်အချက်များအားလုံးကို ဆိုလိုပါသည်။
အဆင့်( ၄ ) ။ စီမံကိန်းကို သရုပ်ဖော်ခြင်း
ဂြိုဟ်တုစီမံကိန်းကို သရုပ်ဖော်ရာတွင် ဂြိုဟ်တုစနစ်တစ်ခုလုံး၏ လုပ်ဆောင်ချက်စနစ်များနှင့် အာကာသနှင့်ပတ်သတ်သော စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အစိတ်အပိုင်းများ အားလုံးကို စီစဉ်ထည့်သွင်းပေးရပါမည်။
အဆင့်( ၅ ) ။ ဂြိုဟ်တုစနစ်တစ်ခုလုံး၏ လုပ်ဆောင်ချက်စနစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
ဂြိုဟ်တုစနစ်တစ်ခုလုံး၏ လုပ်ဆောင်ချက်စနစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အချက် (၁၀ )ချက် ပါဝင်သော အစီအစဉ်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရပါမည်။
အဆင့် (၆) ။ အလွန်အရေးပါသော အချက်အလက်များသတ်မှတ်ခြင်း
ဂြိုဟ်တုစနစ်တစ်ခုလုံးအတွက် အချက်အလက်များ သတ်မှတ်မှုအပေါ်မူတည်၍ စနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ငွေကြေးကုန်ကျမှုတို့ကို ထိရောက်စွာ ကွဲပြားခြားနားစေပါသည်။
အဆင့် ( ၇ ) ။ စီမံကိန်းမှ အသုံးချနိုင်မှု တန်ဖိုးတွက်ချက်ခြင်း
စီမံကိန်းမှအသုံးချနိုင်မှုကို တွက်ချက်ရာတွင် ဂြိုဟ်တုစနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်အလိုက် ကုန်ကျနိုင်မည့် ငွေကြေးပမာဏ ၊ ကြုံတွေ့နိုင်သည့် အခက်အခဲများ စသည်တို့အပေါ်မူတည် တွက်ချက်ရပါမည်။
အဆင့် (၁၀) ။ စီမံကိန်း အချက်အလက်များသတ်မှတ်ခြင်း
အာကာသစီမံကိန်းတစ်ခု လုပ်ဆောင်ရာတွင် စဉ်းစားရမည့် အချက်များဖြစ်ပါသည်။ အချက် ( ၁၁ ) ချက်အပေါ်မူတည်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆင့် ( ၁၁ ) ။ စနစ်တစ်ခုလုံး၏ လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း
မိမိတို့၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့် လိုအပ်ချက်များ အားလုံးကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားသော စနစ်တစ်လုံး၏ လိုအပ်ချက်များ အဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲပေးရပါမည်။
အဆင့် ( ၁၂ ) ။ စနစ်တစ်ခုလုံး၏ လိုအပ်ချက်များကို စနစ်တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် နေရာချခြင်း
မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို ဂြိုဟ်တုစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံး၏ အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် သင့်တော်သည့် နေရာ၌ တည်ဆောက်လွှတ်တင်ထိန်းချုပ်ဆက်သွယ်ရပါမည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် အမှီအခိုကင်းသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းပြကွန်ယက်တစ်ခုကို တည်ဆောက်လျက်ရှိရာ ရှေ့ခြေတလှမ်းအနေဖြင့် တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်က တတိယကမ္ဘာပတ် လမ်းကြောင်းပြဂြိုဟ်တု တစ်လုံးကို ဇီချမ်းအာကာသစခန်းမှ လွှတ်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်းဂြိုဟ်တုသည်ရှိနှင့် ပြီးဖြစ်သော ဂြိုဟ်တုနှစ်လုံးနှင့် ပေါင်းစပ်၍လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကွန်ယက်တွင်ဂြိုဟ်တု ၃၅ လုံး ပါရှိ၍ ၂၀၂၀ အရောက်တွင် တကမ္ဘာလုံးမှ သုံးစွဲသူများအား ကမ္ဘာ့လမ်းကြောင်းပြ ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ယခုအခါတရုတ်နိုင်ငံသည် အမေရိကန်နှင့် ရုရှပြီးလျှင် အမှီအခို ကင်းသော တတိယမြောက်ဂြိုဟ်တုလမ်းပြစနစ်ကို တည်ထောင်နိုင်သည့် နိုင်ငံအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ (ဆင်ဟွာ)
ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းအလိုက် ဂြိုဟ်တုအမျိုးအစားသုံးမျိုး ( LEO , MEO , GEO ) တို့ရှိသည့် အနက် GEO ဂြိုဟ်တုသည် အလေးချိန်ပမာဏများစွာသယ်ဆောင်နိုင်ခြင်း ၊ ဂြိုဟ်တုသက်တမ်းရှည်ကြာခြင်း၊ ကမ္ဘာမြေပြင် သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ကို ဂြိုဟ်တုတစ်လုံးတည်းဖြင့် လွှမ်းခြုံနိုင်ခြင်း ၊ ဂြိုဟ်တု၏ လွှမ်းခြုံဧရိယာကျယ်ပြန့်ခြင်း ၊ ဂြိုဟ်တုသက်တမ်းတစ်လျောက် ထမ်းဆောင်နိုင်သော ၀န်ဆောင်မှုပမာဏကြီးမားခြင်း ၊ Fiber ၊ wires ၊ Tower အစရှိသည့် မြေပြင်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ အပေါ်မှီခိုမှုမရှိခြင်း စသည့်အားသာချက်များရှိသည်။ GEOဂြိုဟ်တုသည် ဆက်သွယ်ရေး ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့သော ဒေသများနှင့် ဆက်သွယ်ကယ်ဆယ်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် မြေပြင်ဓါတ်ပုံများရယူခြင်း အစရှိသည့် လုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်အသုံးပြုမှုသည် ယနေ့ခေတ်နိုင်ငံများအတွက် အရေးပါသော ကဏ္ဍတစ်ရပ်အဖြစ် အရေးပါလာသည်။
မြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးစခန်း (Earth Station )
ဂြိုဟ်တုအားထိန်းချုပ်ညွှန်ကြားမည့် Earth Station တစ်ခုတွင် staff နှင့် operation ( software၊ hardware ) တို့ပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် Earth Station ရှိ operator များ၏ အတွေ့အကြုံရှိမှု ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုတို့အပေါ်မူပြီး ဂြိုဟ်တုသက်တမ်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အတက်အကျ ဖြစ်ပေါ်မည် ဖြစ်သည်။
ဂြိုဟ်တု (Satellite )
ဂြိုဟ်တုတွင်ပါဝင်မည့် ၀န်ဆောင်မှုများကို ဦးစွာညှိနှိုင်းရမည် ဖြစ်သည်။ အခြားသော ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ထည့်သွင်းလိုလျှင် ဂြိုဟ်တုပိုင်ဆိုင်သူ ၊ ထုတ်လုပ်သူတို့နှင့် ဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်သည်။
ဂြိုဟ်တုအား တင်ဆောင်ပစ်လွှတ်ပေးမည့် ဒုံးပျံသည် အောင်မြင်သည့် သမိုင်းကြောင်းကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်သည်။ ဒုံးပျံ၏ နောက်ဆုံးပစ်လွှတ်မှု လေးကြိမ် ( သို့ ) ဆယ်ကြိမ်အထိ အောင်မြင်မှုရရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒုံးပျံ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ၊တင်ဆောင်နိုင်သော အလေးချိန်ပမာဏ နှင့် ဈေးနှုန်းတို့သည် အဓိကစဉ်းစားရမည့် အချက်များဖြစ်သည်။ ဂြိုဟ်တုစီမံကိန်းတစ်လျှောက်တွင် လွှတ်တင်ရေးဒုံးပျံဖြင့် တင်ဆောင်ပစ်လွှတ်ချိန်တွင် ချို့ယွင်းပျက်စီးနိုင်ခြေ အများဆုံးလည်းဖြစ်သည်။
ဂြိုဟ်တုစီမံကိန်းတစ်ခုတွင် ဂြိုဟ်တုဝယ်ယူသူ ၊ ဂြိုဟ်တုထုတ်လုပ်သူ ၊ ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ပေးသူ ၊ ဂြိုဟ်တုအာမခံပေးသူနှင့် အာမခံအတွက်ညှိနှိုင်းစဉ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမည့် အကျိုးဆောင်များ စသည့်အဖွဲ့အစည်း ( ၅ )ခုပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်။
တရုတ်​နိုင်ငံ၏ ပထမ​ဆုံး​ အသံ​တိတ်​ဂျက်​တိုက်​လေယာဉ်အား​ ပထမဆုံး​​အကြိမ် စမ်း​သပ်​​​မောင်း​နှင်
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး​ အသံတိတ် ဂျက်တိုက်​လေယာဉ်ကို စွမ်း​အင်ပြည့်​ ပထမဆုံး​အကြိမ် စမ်း​သပ်​မောင်း​နှင်ခဲ့​ကြောင်း​ သိရသည်။ J-20 တိုက်​လေယာဉ်သည် ​ရေဒါဖြင့်​ ​ထောက်လှမ်း​မှုကို ​ရှောင်တိမ်း​နိုင်စွမ်း​ ရှိမည်ဖြစ်ပြီး​
တရုတ်၏ စစ်လက်နက် နည်း​ပညာ တိုး​တက်မှု မှတ်တမ်း​တွင် ဂုဏ်ယူ​လောက်ဖွယ် ​အောင်မြင်မှု တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ မျိုး​စပ်နည်း​ပညာသုံး​ တိုက်​လေယာဉ်သည် နိုင်ငံအ​နောက်​တောင်ပိုင်း​ ချန်ဒူရှိ ​လေဆိပ်တစ်ခုမှ ၁၅ မိနစ်ကြာ ပျံသန်း​မှု ပြုလုပ်ခဲ့​ခြင်း​ဖြစ်သည်။
တရုတ်စစ်ဖက် တရား​ဝင် ဝက်ဆိုက်က အဆိုပါ​လေယာဉ် ဆင်း​ သက်လာစဉ် ဝိုင်း​အုံ​နေသည့်​ အရပ်ဝတ် အမှုထမ်း​များ​၏ ပုံကိုလည်း​ ​ဖော်ပြခဲ့​သည်။ ​လေယာဉ်ပျံသန်း​စဉ် ယခင်က တရုတ်၏ ပထမဆုံး​ ကိုယ်ပိုင်ဂျက်တိုက်​လေယာဉ်အဖြစ် မှတ်တမ်း​ဝင်ခဲ့​သည့်​ J-10တစ်စင်း​က ​နောက်​ယောက်ခံ ​လေယာဉ်အဖြစ် လိုက်ပါ ​ဆောင်ရွက်​နေခဲ့​သည်။ တရုတ်စစ်ဖက်သည် အဆိုပါ​လေယာဉ်နှင့်​ ပတ်သက်​သော ဓာတ်ပုံများ​ အင်တာနက်တွင် ပျံ့​နှံ့​နေ​သော်လည်း​ ယင်း​ကို ထိန်း​ချုပ်ရန် ဆန္ဒရှိပုံ မ​ပေါ်​ချေ။
တရုတ်စစ်ဖက်သည် J-20 ကို ကမ္ဘာ​ကျော် အသံတိတ် ဂျက်​လေယာဉ်များ​ ဖြစ်ကြ​သော အ​မေရိကန် စစ်ဖက်သုံး​ F-22 Raptor နှင့်​ ဥ​ ရောပယူနီယံ၏ F-35 Eurofighter တို့​အား​ ယှဉ်ပြိုင်သွား​နိုင်ရန် ​မျှော်လင့်​နေသည်။ တရုတ်နှင့်​ ဆက်ဆံ​ရေး​ တင်း​မာမှုများ​ ရှိ​နေ​သော ထိုင်ဝမ်အ​ နေနှင့်​မူ ယင်း​သတင်း​အတွက် စိုး​ရိမ်စရာ ဖြစ်လာခဲ့​သည်။ ထိုင်ဝမ်သည် သက်တမ်း​ရင့်​ F-16 များ​ကိုသာ အဓိက အား​ပြု​နေရာ J-20သည် နည်း​ ပညာပိုင်း​ ကြီး​ကြီး​မား​မား​ သာလွန်လာဖွယ် ရှိ​နေသည်။ ထို့​အပြင် J-20 သည် အ​မေရိကန်နှင့်​ ရုရှား​လုပ် တိုက်​လေယာဉ်များ​ထက် လက်နက်ပမာဏ ပိုမိုတင်​ဆောင်နိုင်ပြီး​ ခရီး​ပိုမိုရှည်ကြာစွာ ပျံသန်း​နိုင်မည်ဟု ယူဆမှုများ​လည်း​ ရှိ​နေ​ကြောင်း​ သိရှိရသည်။
သက်ရှိများ နေထိုင်နိုင်ဖွယ် ရှိသော ဂြိုဟ်ပေါင်း ၁၂၃၅ ကို နာဆာ အဖွဲ့ က ပြသ
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နာဆာ အဖွဲ့က နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင် တွေ ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လုံးလုံး မစ်ကီဝေး နဂါးငွေ့တန်း အတွင်းမှာ ကမ္ဘာ နဲ့ တူပြီး သက်ရှိတွေ နေထိုင် နိုင်ဖွယ် ရှိတဲ့ ဂြိုဟ်တွေကို ပိုက်စိပ်တိုက် ရှာဖွေ ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ရှာဖွေ ပြီးတဲ့ နောက် နာဆာအဖွဲ့ ဟာ သူတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ နေအသီးသီးကို လှည့်ပတ် နေတဲ့ ဂြိုဟ်ပေါင်း ၁၂၃၅ ကို အရွယ်အစား အစဉ်လိုက် စီစဉ်ပြီး မတ်လ ၂၉ ရက် နေ့ မှာ ထုတ်ဖော် ပြသ လိုက် ပါတယ်။ အဲဒီ ဂြိုဟ်တွေကို ကပ္ပလာ အာကာသ ကြည့်မှန်ပြောင်း ကို အသုံးပြုပြီး ရှာဖွေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ရှာဖွေခဲ့မှုက ညဘက် ကောင်းကင် ရဲ့ အပုံလေးရာပုံ တစ်ပုံပဲ ရှာဖွေ ရသေးတာ ဖြစ်တာမို့ နောက်ထပ် ကမ္ဘာ နဲ့ တူတဲ့ ဂြိုဟ်တွေ အများကြီး ထပ်မံ တွေ့ရှိ လာဖို့ ရှိပါ သေးတယ်။
OAO Rocket and Space Corporation Energia
ယခင် S.P. Korolev ၊ ထိုမှတစ်ဆင့် S.P. Korolev Rocket and Space Public Corporation Energia ယခုလက်ရှိ OAO Rocket and Space Corporation Energia သည်ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဗျူဟာမြောက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူလိုက်ပါသော အာကာသယာဉ်များတည်ဆောက်ခြင်းတွင် ဦးဆောင်နေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းသည် အထူးသဖြင့်မြောက်များစွာသော နေရာများတွင်အသုံးချနိုင်သော အာကာသနည်းပညာအသစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်နှင့် ပတ်လမ်းအတွင်း ၀င်ရောက်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သောဒုံးပျံစနစ်များ ဖွံ့ဖြိုး လာစေရန် အဓိကထား လုပ်ဆောင်နေသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဒုံးပျံနှင့်အာကာသ ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ရရှိလာစေရန် ပြုလုပ်နေသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းသည် အာကာသစက်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် ထိတွေ့ဖူးခြင်းမရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများကို အာကာသနည်းပညာများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးရာတွင်လည်း ရှေ့ဆုံးမှဦးဆောင်နေသော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည်။
ယင်းအဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
· - Primary Design Bureau
· - Baikonur branch
· - ZAO Experimental Machine Building Plant, RSC Energia
· - ZAO Valzhskoye DB
· - ZAO PO Kosmos, RSC Energia
· - Developed Social Infrastructure
ယင်းအဖွဲ့အစည်း၏ ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းကို ရုရှားအစိုးရမှ ပိုင်ဆိုင်သည်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် လက်ရှိအမည်ကိုရရှိသည်။ ထိုမတိုင်ခင်က ယင်းအဖွဲ့အစည်းအား Special Design Bureau – 1 (OKB – 1), Central Design Bureau of Experimental Machine Building (TsKBEM), Scientific-Production Association (NPO) Energia ဟု ခေါ်သည်။
၂၀ ရာစု၏ ၁၉၄၀ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၅၀ အစောပိုင်းနှစ်များတွင် အဖွဲ့အစည်းသည် ပဲ့ထိန်းစနစ်ပါဝင်သည့် ဒုံးပျံရှေ့ပြေးပုံစံများကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ယင်းဒုံးပျံများတွင် ဗျူဟာမြောက် ရွေ့လျားပစ်စင်များမှ ပစ်လွှတ်နိုင်သော ဒုံးပျံများ၊ ရေငုပ်သင်္ဘောမှပစ်လွှတ်နိုင်သော ဒုံးပျံများနှင့် ဗျူဟာမြောက်တိုက်ချင်းပစ် သာမိုနျူကလီးယားလက်နက်များ အထိ ပါဝင်ခဲ့သည်။
အဖွဲ့အစည်းသည် ဗျူဟာမြောက်ဒုံးပျံ ၁၄ မျိုးကိုပြုလုပ်ခဲ့၍ ယင်းတို့ထဲမှ ၁၁ မျိုးကို အပြည့်အ၀အသုံးချနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုဒုံးပျံ ၁၁ ခုထဲ၌ high-temperature နှင့် lowtemperature liquid propellant အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သော liquid rocket နှင့် solid rocket တို့၏ ရှေ့ပြေးပုံစံများပါဝင်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးအာကာသသို့ လွှတ်တင်သော ဒုံးပျံဖြစ်သည့် R-7 သည် ယနေ့အချိန်ထိတိုင်အောင် ကမ္ဘာ့စိတ်အချရဆုံး ဒုံးပျံအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ထိုစီမံကိန်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံဒုံးပျံလက်နက် တပ်ဆင်ရေးကို အထောက်အပံ့ပေးခဲ့သည်။
ပထမဆုံးဂြိုဟ်တု (Sputnik – 1957) နှင့် ယင်းအား ပတ်လမ်းထဲသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည့် ပထမဦးဆုံးဒုံးပျံ R-7 ၊ အာကာသထဲသို့ ပထမဦးဆုံးရောက်ရှိသည့် ယူရီဂါဂါရင် (၁၉၆၁) ၊ သောကြာဂြိုဟ်၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့် လသို့ပစ်လွှတ်သော ပိုင်အိုးနီးယား အာကာသယာဉ် (၁၉၅၉-၁၉၆၉) ၊ လပေါ်သို့ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့သော ပိုင်အိုးနီးယား လဆင်းယာဉ် (၁၉၆၀) စသည့် စီမံကိန်းများကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းစီမံကိန်းများကို National rocket-space system ၏ ဒီဇိုင်နာအကြီးအကဲဖြစ်သော S.P. Korolev ၏ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သော အကြံဥာဏ်များ၊ အစွမ်းအစများနှင့်ဖန်တီးကာ ပြီးမြောက်စေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ S.P. Korolev သည် ပါရမီရှင် အင်ဂျင်နီယာနှင့် မန်နေဂျာဖြစ်ပြီး လက်တွေ့ကျသော အာကာသလေ့လာရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်ကိုစတင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့အစည်းသည် အောက်ပါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အာကာသသို့ ပထမဦးဆုံး ရောက်ရှိခဲ့သည့် ယူရီဂါဂါရင် ပါဝင်သော Vostok (၁၉၆၀-၁၉၆၃) ၊ အခြားလူလိုက်ပါသည့် အာကာသယာဉ်များဖြစ်သည့် Voskhod (၁၉၆၄-၁၉၆၈) ၊ Soyuz (၁၉၆၆-၁၉၈၁) ၊
Soyuz T (၁၉၇၉-၁၉၈၆) ၊ Soyuz TM (၁၉၈၆-၂၀၀၂) ၊
အာကာသကုန်ပစ္စည်းသယ်ယာဉ် Progress (၁၉၇၈-၁၉၈၉) ၊ Progress M (၁၉၈၉ မှ လက်ရှိ) ၊
ပတ်လမ်းပေါ်၌ ရှိသည့် Salyut စခန်း (၁၉၇၁) ၊ Salyut-4 (၁၉၇၄-၁၉၇၇) ၊ Salyut-6 (၁၉၇၇-၁၉၈၂) ၊ Salyut-7 (၁၉၈၂-၁၉၉၁) နှင့် module အများအပြားပါဝင်သည့် Mir အာကာသစခန်း (၁၉၈၆-၂၀၀၁) ၊
အာကာသနှင့် ကမ္ဘာမြေကို သုတေသနပြုလုပ်သည့် ပတ်လမ်းပေါ်မှ စောင့်ကြည့် လေ့လာ သော Gamma အာကာသယာဉ် (၁၉၉၀-၁၉၉၂) ၊
ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်၏ ပုံရိပ်အပြည့်အစုံကို ရယူပေးခဲ့သော အာကာသယာဉ် Zenit (၁၉၆၂) ၊
ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုများ၏ ရှေ့ဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည့် Molina-1 (၁၉၆၅) ၊
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လွှတ်တင်ရေးယာဉ်ဖြစ်သည့် Energia (၁၉၈၇) နှင့် ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင် သော အာကာသယာဉ် Buran (၁၉၈၆) ၊
ထို့ပြင် အခြားစီမံကိန်းများသည် ဒုံးပျံနှင့် အာကာသနည်းပညာစနစ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန် အသုံးဝင်လာစေရန် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ယင်းတို့မှာ လပေါ်သို့ လူသားများ သွားရောက် နိုင်ရန်အတွက် L1 နှင့် L3 စီမံကိန်များ ၊ Superheavy Launch Vehicle H1 ၊ multipurpose orbital complex နှင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်၌ လူနေထိုင်ရန် စီမံကိန်များ ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်း သည် နိုင်ငံတကာအာကာသ ပရိုဂရမ်များဖြစ်သည့် Soyuz-Apollo နှင့် Intekosmos စသည်တို့တွင် အဓိကနေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်း (ISS) ၏ ရုရှားနိုင်ငံအပိုင်းကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်၌ စတင်တပ်ဆင်၍ ၁၉၉၈ ခုနှစ်၌ စတင် အလုပ်လုပ်သည်။ ယင်းစီမံကိန်းသည် ရုရှားနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်များ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့သည် ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံရယူခြင်းအပိုင်း (Functional Cargo Block – FCB) ဖြစ်သည့် Zarya ကိုတီထွင်မှုနှင့် အသုံးချခြင်း ၊ Module Zvezda (၂၀၀၀ ခုနှစ်) ကိုတီထွင်မှု ၊ဆိုက်ကပ်သည့် Module အပိုင်းဖြစ်သော Pirs (၂၀၀၁ ခုနှစ်) ကို တီထွင်မှု စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်း (ISS) ပရိုဂရမ် ၏ အောက်တွင် Progress M ၊ Progress M1 နှင့် Soyuz TM အာကာသယာဉ်များကို ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် mission အာမခံမှု (၂၀၀၀ ခုနှစ်) တို့ကို လည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လူလိုက်ပါသော အာကာသယာဉ်ဖြစ်သည့် Soyuz TMA ကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း (ISS) ပရိုဂရမ် ၏ အောက်တွင် တီထွင် ဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Soyuz အမျိုးအစားနှင့် Progress အမျိုးအစား အာကာသယာဉ်များဖြင့် နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်း (ISS) တွင် အာကာသသုတေသနနှင့် စမ်းသပ်မှု Program များကို တပ်ဆင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း၏ ရုရှားနိုင်ငံအပိုင်းကို တည်ဆောက်ခြင်း ၊ Multipurpose ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် robotic ဖြစ်ထွန်းမှုအတွက် အရွယ်အစားသေးငယ်သည့် ပါဝါနှင့် သုတေသန module တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Cybernetics ၊ nanotechnologies နှင့် microelectronics အစရှိသော ခေတ်သစ်နည်းပညာ ရပ်များ အပေါ်အခြေခံ၍ နည်းပညာသစ် အာကာသယာဉ်များ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် တီထွင်ဖန်တီး ခြင်းများကို ပြုလုပ်နေသည်။
နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းတွင် အသုံးပြုသည့် ဥရောပ အာကာသကုန်ပစ္စည်းသယ်ယာဉ် ဖြစ်သည့် (ATV – Automated Transfer Vehicle) ကို ပို့လွှတ်ခြင်းနှင့် ယင်း၏ refueling system ၊ docking system ၊ docking unit နှင့် control system တို့ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်မှစ၍ Universal Space Bus ဖြစ်သည့် Viktoria အပေါ်အခြေခံ၍ ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုများကို တီထွင်ခြင်း ၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန် ထမ်းဆောင်စေခြင်းများကို ပြုလုပ်နေသည်။
အထက်ပါ space bus ကို အသုံးပြု၍နိုင်ငံနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာတွဲဖက် လုပ်ကိုင်သူများ ရင်ဆိုင်နေရသည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သော ဂြိုဟ်တုများကို တီထွင်ဖန်တီး ထုတ်လုပ်ခြင်း (ဥပမာ။ ။ Earth Remote Sensing ဂြိုဟ်တုများ) တို့ကို ပြုလုပ်နေသည်။
၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် DM ကိုတီထွင်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ Proton နှင့် Zenit-3SL တို့တွင် Space stage အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သော DM-SL အမျိုးအစား upper stage များကို ၁၉၉၈ ခုနှဏ်တွင် တီထွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ယင်းအမျိုးအစားများကို မြေပြင်လွှတ်တင်ရေး စီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် DM-SLB upper stage အမျိုးအစားကဲ့သို့သော ခေတ်သစ်အမျိုးအစားများ ဖြစ်ပေါ် လာစေရန် ထပ်တိုး အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ၊ ယူကရိန်း ၊ နော်ဝေးကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ပင်လယ်ပြင်မှ နေ၍ စီးပွားဖြစ် ဂြိုဟ်တုများကို ပတ်လမ်းနိမ့်များထဲသို့ Zenit-3SL ဒုံးပျံကို အသုံးပြု၍ လွှတ်တင်နိုင် ရန် Sea Launch Rocket နှင့် Space Complex တို့ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အခါအားလျော်စွာ ယင်း complex အတွက် ဒုံးပျံအပိုင်းကို ထပ်တိုး အဆင့်မြှင့်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်။
ဘိုင်ကိုနော အာကာသဒုံးပျံလွှတ်တင်ရေးစခန်းအပေါ် မှီခိုမှုနည်းပါးရန်အတွက် မြေပြင်အခြေစိုက် ဒုံးပျံလွှတ်တင် ရေးစခန်းများနှင့် ပင်လယ်အခြေစိုက် ဒုံးပျံလွှတ်တင်ရေး နေရာများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
ကွဲပြားခြားနားသော ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် ကမ္ဘာအနီးတွင်ရှိသော ပတ်လမ်းများအတွင်းသို့ အာကာသ ယာဉ်များ လွှတ်တင်နိုင်ရန် ရင်ဆိုင်ရမည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် ရုရှားဒုံးပျံများ ၏ power ကို တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နေသည်။
ထပ်မံလုပ်ဆောင်မည့် Program များ
နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း၏ ရုရှားနိုင်ငံအပိုင်း တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ယင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အာကာသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လူလိုက်ပါသော နည်းပညာအသစ် အာကာသသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။
အခြားဂြိုဟ်များသို့ လူလိုက်ပါသော အာကာသယာဉ်များ ပို့လွှတ်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။ ကြီးမားသော အာကာသ antenna နှင့် reflector များအပေါ်အခြေခံ၍ အာကာသဆက်သွယ်ရေးစနစ် ၊ power စနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။
Service များ ထောက်ပံ့ဖန်တီးပေးခြင်း
နိုင်ငံတကာ အာကာသ အေဂျင်စီများ ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှု့် သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆို၍ အာကာသယာဉ်မှုးများကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်း ၊ ပျံသန်းပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လျက် ရှိသည်။
နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း၏ ရုရှားနိုင်ငံအပိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော payload များ ၊ Soyuz နှင့် Progress အာကာသယာဉ်များကို နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အသုံးပြုနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဌာနများ ၊ ရုရှားနိုင်ငံမှ စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုသူများ ၊ ရုရှား ဖက်ဒရယ် အာကာသ အေဂျင်စီ (Roscosmos) နှင့် သဘောတူထားသော အခြားနိုင်ငံများအတွက် ဒုံးပျံနှင့် အာကာသ နည်းပညာများကို ပုံစံပြုထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးလျက် ရှိသည်။ ယင်းလုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး ဂြိုဟ်တုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း တို့ပါဝင်သည်။
ရုရှားဖက်ဒရယ် အာကာသအေဂျင်စီနှင့် သဘောတူညီထားသော အခြားအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အာကာသစနစ် အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း ၊ မြေပြင် အခြေစိုက် အဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း ၊ အာကာသယာဉ်များ ထုတ်လုပ်လွှတ်တင်ပေးခြင်း ၊ မြင့်မားသော နည်းပညာများအား အသုံးချနိုင်ရန် အကြံဥာဏ်များ ပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်း အဖွဲ့အစည်းသည် ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာ အာကာသ သုတေသနဌာနဖြစ်သည့် Mir အာကာသစခန်းနှင့် ယင်း၏ စီမံကိန်းများဖြစ်သော Euromir ၊ Mir-shuttle ၊ Mir-NASA စသည်တို့ကို ပြုလုပ်အသုံးချနိုင်ရန်အတွက် ကူညီထောက်ပံ့လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ယင်းစီမံကိန်းများမှ နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်း (ISS) နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထို့ပြင် Transnational ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ပင်လယ်ပြင်မှ ဒုံးပျံလွှတ်တင်သည့် စခန်းကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဥရောပ အာကာသကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးယာဉ် (ATV – Automated Transfer Vehicle) ၊ မြေပြင်အခြေစိုက်လွှတ်တင်ရေး စီမံကိန်း ၊ နည်းပညာသစ် ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တု ၊ Universal Space Bus ကိုအခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်သော remote sensing ဂြိုဟ်တု Belka စသည်တို့ကိုတီထွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အာကာသလွှတ်တင်ရေးစခန်း အသစ်များကိုလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
အဖွဲ့အစည်း၏ စီမံကိန်းများကို အမြဲမပြတ် ဦးဆောင်ခဲ့သော ပညာရှင်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
S.P. Korolev (၁၉၄၆-၁၉၆၆)
V.P. Glushko (၁၉၇၄-၁၉၈၉)
Yu.P. Semenov (၁၉၈၉-၂၀၀၅)
ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် Russian Academy of Sciences မှ corresponding member ဖြစ်သည့် V.A. Lopota က အဖွဲ့အစည်းကို ဆက်လက်ဦးဆောင်နေသည်။
အဖွဲ့အစည်းသည် Order of Lenin ဆု (၄) ခု ၊ Order of the October Revolution ဆု (၁) ခု နှင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း သမ္မတ၏ ကျေးဇူးတင်သ၀ဏ်လွှာတစ်ခုတို့ ရရှိထားသည်။
ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် ရုရှားသိပ္ပံ အကယ်ဒမီ၏ အဖွဲ့ဝင် (၃) ဦးနှင့် corresponding အဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး ၊ ဒေါက်တာဘွဲ့ရ သိပ္ပံပညာရှင် (၂၉) ဦးနှင့် အခြား သိပ္ပံပညာရှင် (၁၉၇) ဦးတို့ ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ပါမောက္ခအဆင့်ရှိသော သိပ္ပံပညာရှင် (၂၀) ဦးက သင်ကြားမှုများကို ထုတ်လုပ်ခြင်းအဆင့်များနှင့် ပေါင်းစပ်၍ သင်ကြားပေး နေသည်။
ဒုံးပျံနည်းပညာများနှင့် အာကာသနည်းပညာများကို ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ တီထွင်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် အဖွဲ့အစည်း၏ ၀န်ထမ်း (၂၅) ဦးသည် ဆိုရှယ်လစ်အလုပ်သမား သူရဲကောင်းဆုတံဆိပ် ချီးမြှင့်ခံရသည်။ S.P. Korolev နှင့် V.P. Glushko တို့သည် အဆိုပါဆုကို နှစ်ကြိမ်တိတိ ရရှိခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်း၏ ၀န်ထမ်း (၂၀၀) ကျော်သည် Lenin ဆု ၊ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုမှ ချီးမြှင့်သောဆုနှင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း အစိုးရမှ ချီးမြှင့်သောဆုများ ရရှိသည်။